Vashandi email inopinda
Primary Chikoro & Nursery
Chikamu chePortico Academy Trust.
kuvhura magonhi, kuvhura mukana
MAITIRO UYE ZVINOGONESESA
CALENDAR &amp; TERM MAZUVA
KuPorters Grange, chinangwa chedu ndechekupa mwana wese ruzivo rwakakura uye rwakadzikama runosimudzira ruzivo nekukura uku vachikudziridza hunyanzvi. Isu tinoshuvira kuve nedzidzo inoshingairira kubatanidza vadzidzi uye inogonesa kugona kwakanaka kana kuri nani. Pakati pedzidzo yedu tinotarisisa kutsigira vana vedu nekukura kwavo pakunamata, patsika, patsika nemagariro. Ndokumbirawo ubaye pano kuti uwane rumwe ruzivo nezveSMSC.
Sechikoro, tinodzidzisa nhoroondo, jogirafi, hunyanzvi uye dhizaini tekinoroji (DT) kuburikidza neyedu 'Yakabatana Kuraiti'. Zvimwe zvidzidzo zvakaita sePSHE, RE, ChiFrench, Mumhanzi uye PE zvinodzidziswa zvakasiyana kunyangwe hazvo kubatana kunoitwa nezvidzidzo izvi kana zvichinyatsovandudza mikana yekudzidza. Tinotenda kuti nzira iyi yakabatanidzwa inobvumira vana kuti vagone kubatana pakati peunyanzvi hwavanoshandisa muchidzidzo chimwe nechimwe uye kusimbisa kudzidza kwavo munzvimbo dzakasiyana. Chirungu, maths uye komputa hunyanzvi zvinodzidziswawo mukati meConnected Curriculum. Mutemu wega wega une 'musoro' wakasiyana sekutarisa kwawo, uye kuburikidza neizvi zvirimo zveNational Curriculum zvinounzwa. Takaronga mikana yekuti vana vakudziridze hunyanzvi hwavo muchidzidzo chega chega uye vokure vave chivimbo, vadzidzi vanozvimirira.
Yakaburitswa pazasi magwaro anobatsira ane chekuita neConnected Curriculum neSainzi.
Year 1 vadzidzisi vanoshandisa mu-iyo-iyo nguva kuronga kupa zvine chinangwa mikana yekudzidza yevana vavo.
Yese Chikoro Sayenzi Pakati Pakati Pechirongwa
Vadzidzi vese vanotora chikamu muchidzidzo cheChirungu chezuva nezuva chinotarisa mukuvandudza kweakakosha hunyanzvi hwekuperetera, mazwi, girama uye nyora. Vana vese vanokurudzirwa kunyora vakazvimiririra, kazhinji vachishandisa nyaya dzinozivikanwa senge chinhu chinokurudzira. Pamusoro pechidzidzo cheChirungu chezuva nezuva, Mafoniki anodzidziswa muKS1 uye chiperengo nekunyora zvinodzidziswa muchikoro chose.
KuPorters Grange tinodzidzisa 'Synthetic Phonics' tichishandisa iyo Tsamba uye Inonzwika chirongwa. Vana vanoziviswa kuChikamu 1 chechirongwa muNursery yedu. Munguva yeFace Stage vana vanodzidza kuti mazwi akaputswa kuita zvidimbu zvidiki zveruzha, anonzi phonemesi. Mukati memakore 1 ne2 vana vanozodzidza ese manzwi (kana manzwi) makumi mana nemana mururimi rweChirungu.
Chikamu Chekutanga cheTsamba neManzwi chinotarisa mukuvandudza hunyanzvi hwekutaura nekuteerera kwevana uye nekuisa hwaro hwebasa remheremhere iro rinotangira muChikamu 2. Kukosheswa kuri muChikamu 1 ndechekuti vana vazive mheremhere yakavapoteredza uye vovagadzirira kuti vagadzire kusanganisa kwemuromo uye kupatsanura hunyanzvi.
Chikamu 1 chakakamurwa kuita zvikamu zvinomwe. Chikamu chimwe nechimwe chine tambo nhatu:
* Kuisa mukati menzwi (rusarura rwekunzwa)
* Kuteerera uye kuyeuka manzwi (auditory memory uye kuteedzana)
* Kutaura nezve ruzha (kusimudzira mazwi uye nzwisiso yemutauro)
Vana vanobva vafambira mberi kuburikidza neChikamu 2 kusvika ku6 panguva yeKiyi Stage 1. Vanodzidza kuverenga uye kuperetera mazwi vachishandisa ruzivo rwavo rwemaphoni. Isu tinoshandisa nzira dzakasiyana siyana dzekudzidzisa uye zviwanikwa muzvikamu zvedu zvezuva nezuva zvemazwi. Semuenzaniso muGore 1, vana vanozokumbirwa kuverenga mazwi panguva yetsamba nemanzwi ekudzidzisa zvikamu. Mamwe emazwi mazwi chaiwo uye mamwe acho mazwi ekunyepedzera (kana mazwi ekumwe).
Kudzidziswa kwemazwi kunoenderera mukati meKiyi Stage 2 kutsigira uye kusimudzira hunyanzvi hwekuverenga uye chiperengo.
Pakutanga, vana vedu vanoziviswa kune akasiyana mabhuku anogona kududzirwa. Izvi zvinobatsira kupinza vana vedu kune akasiyana manzwi ezwi ruzha. Isu zvakare tine akasiyana akasiyana mabhuku ese ari maviri engano uye asiri eengano kuverenga mabhuku kugonesa vana kukudziridza hunyanzvi hwekuverenga uye kuwedzera ruzivo rwavo rwezvakasiyana zvinyorwa. Kuverenga kunodzidziswa kuburikidza nekuzvimiririra, inotungamirwa uye yakazara kirasi (yakatetepa) kuverenga. Vana vanotarisirwa kuverenga nguva zhinji pamba kuti vavandudze mazwi avo ekuziva, kugona kwavo uye kunakidzwa kwekuverenga.
Ese mabhuku edu ekuverenga akarongeka kuita 'mabhuku mabhendi', inova nzira yekumisikidza mabhuku zvichienderana nezinga ravo rekuoma. Vana vanozofamba kuburikidza nemabhandi ebhuku sezvo hunyanzvi hwekuverenga hunowedzera. Vana vanotungamirirwa mukusarudza kwavo bhuku nemudzidzisi wavo kuti vaone kuti vanokwanisa kuwana zvinyorwa uye vanzwisise zvirimo. Vana vanokurudzirwa kusarudza mabhuku anofukidza huwandu hwenhema uye zvisiri zvekufungidzira g enres.
Vana pachikoro chedu vanokwereta mabhuku kubva kuraibhurari yedu inoshamisa iyo ine huwandu hwakawanda hwenhema uye zvisiri zvekunyepedzera zvinyorwa. Vana vanoshanyira raibhurari vhiki rega rega nekirasi yavo uye vanokurudzirwa kusarudza kusvika kumabhuku matatu avanosarudza. Aya mabhuku anogona kuendeswa kumba kunogovana nemhuri yavo neshamwari.
Tinokurudzira kuverenga kuti tifare uye kune zviitiko zvakasiyana siyana mukati megore zvakagadzirirwa kukurudzira izvi zvakaita seSvondo reMabhuku, Svondo reNhetembo, mafaro emabhuku uye vanyori vanoshanya.
Maitiro Edu kuMaths
PaPorters Grange Primary uye Nursery Chikoro isu tinotenda kuti masvomhu chishandiso chehupenyu hwezuva nezuva. Iyo yakazara netiweki yemafungiro uye hukama iyo inopa nzira yekutarisa uye kuita pfungwa yepasirese. Iyo inoshandiswa kuongorora uye kutaurirana ruzivo uye mazano uye kugadzirisa akasiyana eanoshanda mabasa uye chaiwo hupenyu matambudziko.
Icho chinangwa chedu kukudziridza masvomhu ne:
hunhu hwakanaka kumathematics uye kuziva kwekunakidzwa kwemasvomhu;
kugona uye kuvimba musvomhu kutsetseka, pfungwa uye hunyanzvi;
kugona kugadzirisa matambudziko, kufunga, kufunga zvine musoro uye kushanda zvakarongeka uye nemazvo;
kutanga uye kugona kushanda zvese zvakazvimiririra uye nekubatana nevamwe;
kugona kutaura mathematics;
kugona kushandisa uye kushandisa masvomhu pamharidzano uye mune chaiwo mamiriro ezvinhu;
kunzwisiswa kwemasvomhu kuburikidza nehurongwa hwekubvunza uye kuyedza.
Isu tinovavarira vabereki:
kuti vabatanidzwe mukudzidza kwevana vavo kuburikidza nekutsigira nzira dzekuverenga dzinoshandiswa pachikoro uye kuona kuti basa rechikoro rapedzwa kusvika panogona napo kugona kwevana vavo.
Mumakore 1 kusvika 6 tinoshandisa Maths Hapana Dambudziko. Maths Hapana Dambudziko chirongwa chakavakwa chakatenderedza nzira yeSingapore yekudzidzisa masvomhu uye inounzwa mumapoka emhando dzakasiyana. Isu tinotenda zvakare kuti hunyanzvi hwemasvomhu hunofanira kuvandudzwa uye kuendeswa kune iyo kosi yezvidzidzo nevadzidzisi vachigadzira zvinongedzo zvakajeka kuvana sezvavanomuka.
Ndokumbirawo ubaye apa kune edu Mathematics Maverengero Matanho
Chinangwa chedu ndechekupa huwandu hwakazara uye hunosanganisira hwePSHE kosi iyo inopa vana ruzivo, hunyanzvi uye hunhu kuti vazvichengete vane hutano uye vakachengeteka vachigadzirira basa nehupenyu munharaunda medu neBritain yanhasi. Dzidzo yedu ine kusimbisa kwakasimba pakunyora kuverenga, kuvaka kusimba uye kusimudzira hutano hwepfungwa uye hwepanyama kuitira kuti vana vagoneswe kuwana kugona kwavo kuzere uye vape zvakanaka kune akasiyana nzanga matinogara. Isu takaisa hunhu hwakadzivirirwa hwerudzi, zvebonde, zvekutenda & zvitendero, hutano, kuremara, kuzivikanwa kwevakadzi, kuroora & kudyidzana kwevanhu, nhumbu & maternity nezera mukati medzidzo yedu
Dzidzo yedu yakafemerwa uye inotungamirwa nesangano rePSHE, ichibvumira vana vedu kuti vaongorore madingindira matatu epamoyo: Hutano neHurumende, Kugara munyika yakafara uye Hukama. Vana vanopihwa mukana wekuongorora yega yega madingindira kaviri pagore redzidzo. Kubudikidza nedzidziso yePSHE neRSE, tinotsigira vana vedu kuzvichengetedza, kutarisira rukudzo uye kugona kutaura 'kwete' kuburikidza nedzidziso yemvumo. Yedu PSHE inotarisisa inowedzera kubvumidza kuchinjika mukarikhulamu kuongorora zvidzidzo zvinoenderana mukati mehupenyu hwechikoro uye nharaunda yedu panguva iyoyo.
Mumakore Ekutanga vana vanotsigirwa kugadzirisa manzwiro, kukudziridza pfungwa yakanaka yekuzvimirira, kuzvimisikidza zvinangwa zvakapusa uye kuvimba mune zvavanogona.
MuChikamu Chekutanga uye chechipiri ongororo yemusoro wenyaya inosanganisirwa mukati meongororo yedu kubvumidza kusangana kuchizadzisa zvido zvemunhu ne zveboka. Zvidzidzo zvedu zvevhiki nevhiki zvinobva zvarongwa kugonesa kufambira mberi muzivo, hunyanzvi uye mazwi. Zvisinei, isu tinewo simba rekuongorora PSHE neRSE vhiki nevhiki kuburikidza nekukurukurirana uye kuyambuka zviitiko zvedzidzo.
Pakati pedzidzo yedu tinoramba tichipa mikana yekuvandudza vana vedu vanotsigira kudzidzisa kwedu.
Kana iwe uine mimwezve mibvunzo nezve iyo kosi ndapota inzwa wakasununguka kubata hofisi yechikoro uye mumwe munhu anenge achinyanya kufara kubatsira.
Porters Grange Primary Chikoro & Nursery, Lancaster Gardens, Southend paGungwa, Essex, SS1 2NS
Chikamu chePortico Academy Trust - kuvhura magonhi, kuvhura mikana - www.porticoacademytrust.co.uk